DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA LENOVO G50 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Chọọ ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Lenovo G50
N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwere ike ịdị mkpa iji tọgharịa faịlụ PDF na-ebipụta akwụkwọ faịlụ na faịlụ BMM bitmap, dịka ọmụmaatụ, maka edezi ma ọ bụ mmezi eserese. Taa, anyị ga-agwa gị otu esi eme usoro a.
PDF na ụzọ ntụgharị ụzọ BMP
Ị nwere ike ịtụgharị akwụkwọ PDF gaa na BMP oyiyi site na iji usoro mgbanwe mgbanwe. Onye nchịkọta akụkọ dị elu nwere ike ijikwa akwụkwọ dị mfe. Rịba ama na ọ dịghị ngwanrọ ọ bụla maka ntọghata dị otú ahụ na ngwaọrụ ngwaọrụ Windows, ya mere, ngwọta nke atọ dị oké mkpa.
Usoro 1: Tipard Free PDF na BMP Ihe Ntụgharị
Dị ka anyị kwuru n'elu, ị nwere ike ịgbanwere akwụkwọ site na otu usoro gaa na onye ọzọ na-eji usoro mmemme pụrụ iche. Ihe kacha mma maka ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ntakịrị ihe omume Free PDF na BMP Converter site na ụlọ ọrụ Tipard.
Nbudata nsonaazụ ọhụrụ nke Free PDF na BMP Ihe Ntụgharị site na saịtị ọrụ.
Gbaa usoro ihe omume a. Pịa na "Njikwa" ma họrọ "Tinye Njikwa (s) ...".
Igbe ga-emeghe. "Explorer". Soro ya na ndekọ ya na PDF-faịlụ, họrọ ya wee pịa "Meghee".
A ga-ebuba akwụkwọ ahụ n'ime usoro ihe omume ahụ. Ahụenyo dị na nri, na ihe ndị dị na etiti nke windo ahụ.
N'elu ala windo enwere ntọala ntọghata. Lelee usoro (BMP bụ ndabara), maka akwụkwọ dị iche iche, jide n'aka pịa "Mee ka mmadụ niile". N'okpuru ihe a bụ nhọrọ nchekwa. Igbe nchekwa "Zọpụta faịlụ (s) dị na nchekwa nchekwa" ga-echekwa PDF ndị a tọghata na nchekwa ahụ na mbụ. Nhọrọ "Hazie" na-enye gị ohere ịhọrọ ndekọ ndekọ nke onwe gị. Họrọ otu ịchọrọ, wee pịa nnukwu bọtịnụ ọbara ọbara "PDF" ịmalite usoro ntọghata.
Dabere n'ụdị akwụkwọ ahụ, ntụgharị ahụ nwere ike iwe oge. Na njedebe nke usoro ahụ, ozi ga-apụta dị ka nseta ihuenyo dị n'okpuru ebe a. Pịa "OK" imechi windo.
Mepee ebe nchekwa ma chọpụta ihe.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ngwa ahụ na-arụ ezigbo ọrụ na ọrụ ahụ, Otú ọ dị, ngwọta a adịghị enwe ntụpọ. Na mbụ, usoro ihe omume ahụ bụ naanị na Bekee, nke abụọ, ọ na-enweghị ike ịnagide ụfọdụ faịlụ buru ibu Free PDF na BMP Converter.
Nhọrọ nke abụọ iji tọghata PDF na BMP bụ iji nchịkọta akụkọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, usoro a kachasị mma, ebe ọ bụ na mmemme ndị dị otú ahụ na-enye gị ohere ịnọgide na-enwe àgwà nke foto ahụ na ụdị ọ bụla a na-agbanweghị agbanwe. Anyị ga-egosi usoro nke ịtụgharị PDF na BMP iji ihe atụ nke nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ GIMP n'efu.
Gbaa usoro ihe omume a. Site na isi menu, họrọ "Njikwa" - "Meghee".
Jiri njikwa faili wee banye GIMP ka ị banye na ndekọ ahụ na faịlụ ahụ. Gosi ya ma pịa "Meghee".
Mpịpị PDF abata ga-emepe. Ihe mbụ ị ga-eme bụ na listi. "Ewepe akwukwọ dị ka" họrọ "Foto". Ihe ndị ọzọ na-adabere ma ịchọrọ ịmegharị akwụkwọ ahụ ma ọ bụ ibe nke ọ bụla. N'okwu mbụ, dị na pịa "Họrọ niile", na nke abụọ, ị ga-ahọrọ akwụkwọ ndị dị mkpa na òké ahụ Ctrl. Lelee ntọala ma pịa "Bubata".
Usoro ntinye akwụkwọ ahụ malitere. Usoro nwere ike iwe oge dị ukwuu ma ọ bụrụ na faịlụ isi iyi dị oke. N'ikpeazụ, ị ga-enweta akwụkwọ ederede site na ibe n'ime usoro ihe omume ahụ.
Lelee akwukwo a choputara; Ị nwere ike ịgbanwe n'etiti ha site na ịpị thumbnail na elu nke windo ahụ. Iji chekwaa peeji mbụ, pịa ọzọ. "Njikwa" ma họrọ "Mbupụ dị ka ...".
Mbụ, na window mepere emepe họrọ ebe ịchọrọ ịchekwa faịlụ a gbanwere. Mgbe ahụ na ala nke windo ahụ, pịa ihe ahụ "Họrọ ụdị faịlụ". Lelee igbe "Foto Windows BMP" wee pịa "Mbupụ".
Ọzọ, windo ga-apụta na ntọala mbupụ faịlụ. Gbanwee ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ma pịa "Mbupụ".
Tinyegharịa nzọụkwụ 5-7 maka akwụkwọ ndị fọdụrụ.
Onye nchịkọta akụkọ ahụ na-enye gị ohere ichebe ihe nke akwụkwọ mbụ ahụ na faịlụ ndị a gbanwere, ma ọ gaghị adaba adaba iji ya - ọ bụla nke faịlụ PDF ga-agbanwe iche, nke nwere ike iwe ogologo oge.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọrụ nke ịtụgharị PDF na BMP bụ nnọọ ihe dị mfe idozi, mana nhọrọ ọ bụla ga-abụ nkwenye ọ bụla. Iji onye ntụgharị ahụ ga-eme ka usoro ahụ dị elu, ma àgwà ahụ agaghị adị njọ, ebe onye nchịkọta akụkọ ahụ na-edebe akwụkwọ ahụ agbanweghị agbanwe, mana na oge nke oge.